एसीमा बस्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! - चारदिशा
September 22, 2019 चारदिशा बिबिध
एजेन्सी – कतिपय मान्छे एसीवाला कोठा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । यो गर्मीको मौसममा त अझ एसीको महत्व धेरै हुन्छ । त्यसैले निर्धक्क एसी चलाएर आराम गर्ने धेरैको बानी हुन्छ ।
तर तपाइलाई थाहा छ । एसीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर गर्छ। लामो समय एसीमा बस्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने चिकित्सकहरु बताउछन् ।
एसीमा धेरै बस्दा खोकीको समस्या हुन्छ। त्यस्तै एसीले फोक्सो र मुटुमा पनि असर गर्छ। धेरियाबेर एसीमा बसेपछि शरीरमा आलस्यता बढ्छ। एसीको हावाले छालामा संक्रमण हुन्छ ।